काठमाडौंमा ७ माघ रातिदेखि जोर-विजोर लागू, के छ नयाँ आदेशमा?
काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार ९८१ जनामा कोरोना
लोकसेवाका लिखित परीक्षा स्थगित
एकै दिन थपिए १२ हजार ३३८ कोरोना सङ्क्रमित
मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिको नेताहरूद्वारा विरोध
डिस होमद्वारा डिलरलाई सम्मान
राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल
‘गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ’
नरसंहार मच्चाउने मन्त्री यादवको प्रपञ्च : सीके राउत
कहिले गुड्ला जनकपुरको रेल?
यातायात वीरेन्द्र रमण
भारतबाट किनेर जनकपुर ल्याएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि रेल सञ्चालनको चाँजोपाँजो मिलेको छैन।
बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपत्‌कालीन अवतरण
बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपत्‌कालीन अवतरण गरेको छ।
५ मंसीर बिहान ६ः१५ मा काठमाडौंबाट रुकुम सल्लेका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान तय भएको थियो। तर, प्रतिकूल मौसमका कारण निगमले उडान रद्द गर्‍यो।
हवाई भाडा पनि बढ्यो, कुन रुटमा कति वृद्धि? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्।
विमानको पाङ्ग्रा नखुलेको घट्नामा क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पालाई कारबाही गर्न सिफारिश पाङ्ग्रा (ल्यान्डिङ गियर) नखुलेको भन्दै विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको विमान काठमाडौं फर्काएको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ।
बाढीले बन्द विराटनगर विमानस्थल ६ कात्तिकबाट खुल्ने बाढी पसेपछि बन्द भएको विराटनगर विमानस्थल शनिबारबाट खुल्ने भएको छ।
दशैंका लागि नौ लाख नागरिकले छाडे काठमाडौं दशैंका लागि नौ लाख नागरिकले काठमाडौं उपत्यका छाडेका छन्। अझै पनि घर जानेको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ।
दशैं-तिहारका वेला ट्राफिक प्रहरीले किन बढाउँछ सुरक्षा जाँच? हरेक वर्ष दशैं-तिहार नजिकिंदै गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन जाँचमा कडाइ गरेको देखिन्छ। किन?
रज्जुमार्ग फेरि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? दुई वर्षसम्म लागेन टु‌ंगो राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले निर्माण गरेको रज्जुमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भए पनि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दुई वर्षसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : प्रदेशको नाममा संघको रजाइँ सिंहदरबारले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा कम्पनी मार्फत ४० लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै छ।
कर उठाउन इम्बोस्डको पासो यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको सुरक्षाका लागि भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै छ। तर, विद्युतीय अनुगमनका लागि आरएफआईडी गेट र हाते रिडर मेसिन एउटा पनि छैन।
दुई महीनापछि चले लामो दूरीका गाडी, कहाँको भाडा कति? कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेका लामो दूरीका गाडी दुई महीनापछि सञ्चालनमा आएका छन्।
बीएसभीआई मोडेलको होण्डा ग्राजिया बजारमा नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा स्कूटरको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले बीएसभीआई मोडलको ग्राजिया स्कूटर सार्वजनिक गरेको छ।
१२ साउनदेखि नेक्सन ईभी बजारमा, यस्ता छन् विशेषता नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले १२ साउनदेखि नेक्सन ईभी सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
अब लामो दूरीका गाडीको कुन रुटमा कति भाडा? यातायात व्यवसायीको माग अनुसार, सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा बढाएको छ।
लामो दूरीका गाडी अझै १० दिन नचल्ने
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन अझै १० दिन नचल्ने भएका छन्।
सिप्रदीद्वारा ६० प्राविधिकलाई विशेष तालीम
सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले ६० प्राविधिकलाई तीन हप्ते विशेष तालीम दिएको छ।
टाटा नेक्सनको इलेक्ट्रिक एसयूभी नेपाल भित्रियो
नेपालको लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले ‘नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूभी’ नेपाल भित्र्याएको छ।
८ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसनको प्यालिसेड नेपालमा, मूल्य दुई करोड हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नयाँ एसयूभी ‘प्यालिसेड’ नेपाल भित्र्याएको छ।
निषेधाज्ञामा सिप्रदीको आकस्मिक मर्मत सेवा कोरोना भाइरस महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा सिप्रदी ट्रेडिङले आकस्मिक मर्मत सेवा दिइरहेको छ।
यस्तो छ आजबाट लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ। आजबाट भने तीन देशका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने भएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरिने सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ।
१० वर्षभित्र साना पेट्रोलियम गाडी प्रतिस्थापन गरिने सरकारले २०८८ भित्र साना पेट्रोलियम गाडी प्रतिस्थापन गरिसक्ने योजना ल्याएको छ।
इन्धनको मूल्य २ रुपैयाँ बढ्दा हवाई भाडा ९० रुपैयाँसम्मले बढ्यो नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य रु.२ ले बढाउँदा वायुसवा कम्पनीले भने रु.९० सम्मले हवाई भाडा बढाएका छन्।
सार्वजनिक बसमा स्मार्ट कार्डबाट भाडा भुक्तानी शुरु स्मार्ट कार्डको प्रयोग गरी सार्वजनिक बसमा भाडा भुक्तानी गर्न सकिने भएकाे छ। यसकाे शुरुआत गाम्चा, नौलिङ्गस्थानदेखि गोपिकृष्ण, शहीदगेट, टेकु, कलंकी हुँदै नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने संयुक्त यातायातबाट गरिएकाे छ।
कार्डबाट सवारी भाडा भुक्तानी गर्न राष्ट्र ब्यांकको अनुमति, फागुनदेखि नगदरहित हुँदै सार्वजनिक सवारी साधनका नगदरहित भाडा भुक्तानी तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने भएको छ। कार्डबाट हुने भुक्तानीले यात्रु तथा सम्बन्धित सवारीलाई सहज हुनुका साथै प्रविधिको प्रयोगलाई समेत बढावा दिने भएको छ।
होन्डा सिटीका दुई भेरियन्ट सार्वजनिक नेपालका लागि होन्डा गाडीको बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले होन्डा सिटीको पाँचौं जेनरेसन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ ।
हुस्सुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तराई तथा दुर्गम भेगका विभिन्न जिल्लाको उडान प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुने तराईका विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत गन्तव्यको उडान दुई दिनदेखि प्रभावित भएको हो।
वायुसेवाकाे सहमति विपरीत विमानस्थलबाट र्‍याम्प बस हटाइँदै, कार्ययोजनाबिनै विद्युतीयमा जान दबाब विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीले यात्रु सेवाका लागि सञ्चालन गरेका डिजेल सवारी हटाएर विद्युतीय सवारी राख्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। वायुसेवा कम्पनीको सहमतिबिना र कार्यायोजना नै नबनाइ भएका सवारी विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै वायुसेवा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
टाटा मोटर्सको कम्प्याक्ट ट्रक इन्ट्रा भी-२० नेपालमा बिक्री शुरू, मूल्य पौने २० लाख सिप्रदी ट्रेडिङले टाटा मोटर्सको कम्प्याक्ट ट्रक टाटा इन्ट्रा भी-२० को नेपालमा बिक्री शुरू गरेको छ। टाटा मोटर्सको यो ट्रक प्रिमियम टफ डिजाइन सिद्धान्तमा बनेको हुँदा ट्रकले आरामदायी यात्रा अनुभवका साथै शक्तिशाली कार्य क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने छ।
सम्पादकः सन्त गाहा मगर सूचना विभाग दर्ता नं. ११६९/०७५/७६